I-BLI Montréal - Funda isiFulentshi noma isiNgisi - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Ingabe ufuna ukufunda isiNgisi noma isiFulentshi?
BUYA MONTREALIzici main
BLI Montreal itholakala enhliziyweni ye-Old Montreal, indawo egcwele impilo, eduze kakhulu nayo yonke indawo enkulu eMontreal. Sitholakala kalula nje imizuzu emibili ukusuka esiteshini sikaMetro d'Armes metro, esakhiweni samagugu esiseduze kweNotre-Dame Basilica.
MontrealHlola futhi uthole idolobha elinezilimi ezimbili
Izikhungo zethu zesimanje zinikeza abafundi umoya okhululekile futhi omnandi owenza inqubekelaphambili yokufunda ibe mnandi futhi imnandi.
Iqinisekiswe yizilimi zaseCanada, iBLI Montreal yisikole solimi esinolwazi lweminyaka engaphezu kwengama-40 embonini yezemfundo yezilimi nezinhlelo zokucwiliswa okugcwele kakhulu zokucwiliswa nokubhiswa kuwo wonke amazinga.
Sisebenzisa indlela eguquguqukayo, egxile kubafundi neyokuxhumana engazukukusiza kuphela ukuba ube nekhono futhi ufunda ulimi kahle, kodwa futhi futhi izokunikeza amathuluzi okuphumelela ezingeni lomhlaba jikelele.
Uma umgomo wakho ukufunda isiNgisi, isiFulentshi noma sobabili, woza e-BLI futhi uphile isipiliyoni sokufunda esiyingqayizivele.
1 ilebhu yekhompyutha
2 Imililo yabafundi
12 Umfundi ngeklasi ngalinye
IMontreal yidolobha lesibili ngobukhulu elikhuluma isiFulentshi emhlabeni ngemuva kweParis. Idolobha elikhuluma izilimi ezimbili. Kunezindawo lapho isiNgisi kuwulimi olukhulunywa kakhulu nezinye lapho kukhulunywa khona isiFulentshi, kepha iningi labantu likhuluma izilimi ezimbili. Kuyahlaba umxhwele ukubona ukuthi abantu bashintsha kanjani ukusuka kolunye ulimi baye kolunye.
Uma ufuna ukufunda isiNgisi noma isiFulentshi endaweni enamasiko amaningi, iMontreal yindawo yokukwenza.
IMontreal idolobha lesibili ngobukhulu elikhuluma isiFulentshi emhlabeni (ngemuva kweParis)
Ikhaya leCirque du Soleil edumile emhlabeni, iMontreal yidolobha lesekethe
IMontreal inenombolo yesibili ephezulu kakhulu yokudlela ngakunye eNyakatho Melika
IMontreal idolobha lokuklanywa le-UNESCO
IMontreal inezitolo ezinkulu kakhulu ezingaphansi komhlaba ezingaphansi komhlaba
IMontreal inezinkathi ezine ezihlukene, okungukuthi, ihlobo, ubusika, intwasahlobo nokuwa
IHockey ngumdlalo owuthandayo weMontreal
Izindleko zokuphila eMontreal ziphakathi kwezinto eziphansi kakhulu eCanada.
Ikhofi - $ 3.00
Iphakethe lokuhamba - $ 82.00 / ngenyanga
IMontreal isondele kwamanye amadolobha amakhulu afana
EToronto, eNiagara Falls
New York kanye neBoston
IMontreal iyisiteji samazwe omhlaba semicimbi eminingi yamasiko. Kunemikhosi engaphezu kwengu-40 unyaka wonke. Imikhosi edume kakhulu yi-jazz nefilimu, kepha idolobha linezinkampani zemidlalo yaseshashalazini zaseNgilandi naseFrance ezingaphezu kwe-100 futhi laziwa nangokuthi yisikhungo semfashini.
Ehlobo, imikhosi ivame kakhulu. Kungalesi sikhathi lapho umcimbi we-International Jazz Festival, ungomunye wezohamba phambili emhlabeni, oneminyaka engama-30 yesiko futhi uheha ababukeli abaningi abavela kuwo wonke umhlaba.
Kukhona futhi enye yemikhosi emikhulu yamahlaya emhlabeni, umkhosi odumile we-Just for laughs.
Ngaphezu kwemikhosi, iMontreal iphinde ibambe neFomula 1 Grand Prix.
ICirque du Soleil edumile isekelwe eMontreal.
Yonke imisebenzi iholwa ngumxhumanisi wemisebenzi kanye / noma uthisha
Indawo emangalisayo kaMontreal ikuvumela ukuba uthole izindawo eziningi ezinhle eduze kwedolobha
Olunye uhambo lwangempelasonto lubandakanya ukuya e-USA ukuyothenga noma eminye imisebenzi. Uma uhlela ukungena e-USA ngenkathi ufunda eMontreal, udinga i-USA Visa evumelekile. Kufanele ufake isicelo se-visa yakho yase-USA ngaphambi kokuza eCanada. Uma uvela emazweni aseNtshonalanga Yurophu naseJapan akudingeki ufake isicelo seVisa yase-USA ngaphambi kwesikhathi, njengoba uzokwazi ukuyithola kusuka e-USA Immigration emngceleni. Iphasiphothi yakho kufanele isebenze okungenani izinyanga eziyisithupha futhi ifundwe ngomshini.